Mbudzi kudya mufenje hufana nyina | Kwayedza
24 Jan, 2020 - 00:01	 2020-01-23T13:14:40+00:00 2020-01-24T00:00:51+00:00 0 Views
KANA mubereki achionekwa nevana vake achidya huku yose ari oga mumba, vana vakatarisa, maitiro akadai aya kudyara mhodzi ichakura igodiridzirwa nevadiki kudzamara vadiki vose mumba vave kudaro kumhuri dzavowo.
Maitiro aya haagumire mumhuri chete, asi anopararira nekumabasa kwatinoona vakuru vemakambani vachidya voga mari yekambani vasingapewo vavanotungamira zvakaringana.
Izvi zvinopararira mumatunhu, nekumatare makuru nemadiki enzvimbo dzatigere.
Chinangwa chedare rino ndechekudzora hunhu hwakaminama mudzimba matinogara, kumabasa nemunyika yose zvayo.
Maitiro akadai anonzi nhafu neVaShona. Munhu ane nhafu anoti dai poto yose yesadza yapakurirwa iye oga. Mushure mekunge apakurirwa sadza iri nehuku yose kana mbudzi yose, anongonyobvora-nyobvora obva asiya, kwava kutorasa, asi vamwe vaine nzara. Munhu akadai anoda kuratidza simba rake mumhuri.
Anofara kuona vamwe vachiseva sadza nemuto, kana kunokumbira chekudya kuvavakidzani. Izvi zvinosvoresa iwe kuonekwa vana vako vachinopambara chekudya iwe uchitoita chekurasa.
Sekutaura kwatinogara tichiita pachikuva chino, tinoti izvi hazviperere mumba, asi tinotora maitiro edu iwaya toenda nawo kumwe kwatinoshandira sekumabasa. Tinoratidza nhafu dzedu nekuzvipa mihoro yakakurisa zvisina mwero, tozvipa mihoro iyoyo nenguva yakanaka.
Tinoratidzazve nhafu dzedu nekutenga motokari dzinenge mabhazi kukura.
Nhafu ingozi huru-huru nokuti inokumukira iwe pachako. Ukadyisa kupfuura mwero unozvimbirwa. Muchidimu nhafu kubira vamwe iwe uchivatorera zvavo. Maitiro aya anokuzvimbira nokuti zvichabuda pachena ukanyadziswa, wobva wazivikanwa hunhu hwako hwakaipa. Vanhu vanokurongera iwe uchimbofunga kuti uri kudya zvemarema. Ngatitarisei muupenyu hwatinorarama, vanhu vakazvimbirwa nenhafu mudzimba matigere nemumakambani matinoshanda. Nekudaro, ngatisiirei vana vedu nhaka yakanaka kwete yenhafu yekudyira vamwe zvinhu zvavo. Tikasiira vana vedu nhaka yenhafu, tinenge tadyara mhodzi yemaramba kupunduka.